WikiNi - Wikipedia
WikiNi dia rindrankajy malalaka wiki anankiray fehezin'ny lisansy BSD manome fomba tsotra, mahomby sy haingana ahafahana mamorona sy mitantana sehatra iray amin'ny tranonkala na amina tranonkala anatina orinasa iray. Maimaim-poana izy sady azo ovaina sy zaraina arak'io lisansy mifehy azy io ihany koa.
3 Fametrahana azy
Navigateur ihany dia fitaovana ampy hampiasana azy, ary tsy mifidy navigateur rahateo izy. Ireto no isan'ireo zava-dehibe afaka atao miaraka aminy :
famoronana, famafàna, fanovàna, fanamarihana pejy amin'ny sehatra, na firy na firy isan'ny mpifarimbona amin'ny fanovàna pejy sy isan'ny pejy.
fitantanana ny fahazoan-dàlana amin'ireo pejy maro samihafa (famakiana, fanovàna, fanamarihana).
fiangaliana ny endriky ny votoatin'ny pejy : mora ny mizatra sy mampiasa izany, na dia tsy manana fahalalàna lasa lavitra momba ny informatika aza ny mpiangaly azy.
fizaràna eo no ho eo ny fampahalalàna momba ny pejy vao noforonina sy vao novaina.
fandalinana sy fitantanana ny sehatra manontolo amin'ny alàlan'ny fitaovana tsotra : drafitry ny sehatra, lisitry ny mpikambana, lisitry ny pejy vao niova, sns.
Fametrahana azy[hanova | hanova ny fango]
Mila serveur web mahazaka PHP sy MySQL fotsiny, dia afaka apetraka ao anatin'ny 10 minitra i WikiNi. Vao vita izay dia afaka ampiasaina avy hatrany ny sehatra ary navigateur ihany no fitaovana hitantanana azy.
wikini.net Sehatra ofisialy
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=WikiNi&oldid=794329"
Voaova farany tamin'ny 17 Oktobra 2016 amin'ny 19:33 ity pejy ity.